Barcelona Oo Gool Dhaliyaha Saddexaad Ee La Liga Ugu Sareeya Ee Cristhian Stuani Ku Heli Karta Qiimo Layaableh Iyo Xidigan Oo Wax Laga Waydiiyay. - Gool24.Net
Barcelona Oo Gool Dhaliyaha Saddexaad Ee La Liga Ugu Sareeya Ee Cristhian Stuani Ku Heli Karta Qiimo Layaableh Iyo Xidigan Oo Wax Laga Waydiiyay.
January 16, 2019 Mahamoud Batalaale
Raadinta Barcelona ee gool dhaliye caawiya Lionel Messi iyo Luis Suarez ayaa halkeeda ka sii soconaysa iyada oo xili ciyaareedyadii la soo dhaafay ay haddba gool dhaliye la soo wareegaysay balse aanu u shaqaynayn sidii ay doonayeen. Gool dhaliyaal tiro badan ayaa Barcelona u diiday in ayna waqti ka heli karin Messi iyo Suarez laakiin kuwo kale ayaaba kooxda laga diray markii ay wax badan soo kordhin waayeen.
Munir ayaa ahaa gool dhaliyihii ugu danbeeyay ee Camp Nou laga diray markii uu waayay fursad uu ku ciyaaro waxaana ka horeeyay Paco Alcacer oo waqti layaableh ku qaadanaya kooxda Borussia Dortmund balse xagaagii la soo dhaafay amaah ugu baxay Germany.
Laakiin kooxda Barcelona ayaa hadda u soo jeedsatay gool dhaliye ay bishan January kooxdeeda ku soo xoojin karto waxaana liiska ay suurtogalka tahay in ay la soo saxiixan karaan safka hore ka galay gool dhaliyaha reer Uruguay iyo kooxda FC Girona ee Cristhian Stuani.
Cristhian Stuani ayaa ah gool dhaliyaha saddexaad ee Lionel Messi iyo Luis Suarez ku soo xiga ee xili ciyaareedkan goolasha ugu badan ka soo dhaliyay La Liga waxayna Barca u aragtaa in uu noqon karo kaabihii Messi iyo Suarez ee ay waqtiga dheer raadinayeen.
Balse waxaaba soo baxay in Barcelona ay qiimo layaableh ku heli karto saxiixa Cristhian Stuani waxayna wararku sheegayaan in Barca ay Stuani ku heli karto lacag ka hoosaysa 15-ka milyan yuro ee qandaraaskiisa FC Girona lagu burburin karo balse xataa 15 milyan yuro ayaaba qiimo aad ugu hooseeya ku ah Stauni oo 12 gool oo La Liga ah soo dhaliyay xili ciyaareedkan.
Laakiin kooxda FC Girona ayaa beenisay in ay wali wax dalab rasmi ah ka heshay Barcelona halka Cristhian Stuani uu farxad ku soo dhaweeyay wararka Camp Nou la xidhiidhanaya balse waxa uu diiday in uu wax faah faahin ah ka bixiyo suurtogalnimada uu saaxiibkiisa Uruguay ee Luis Suarez uu Barcelona ugula biiri karo.
Ernesto Valverde ayaan haysan gool dhaliye badal ugu noqon kara haddii uu Luis Suarez dhaawac soo gaadho waana sababta ay Barcelona hadda diirada u saarayso Cristhian Stuani kaas oo heerka ugu sareeya ugaga soo ciyaaray kooxda Catalonia ka dhisan ee FC Girona.
Si kastaba ha ahaatee, maalmaha soo socda ayaa la filayaa in xog dheeraad ah lag heli doono xiisaha Barcelona ku doonayso Cristhian Stuani kaas oo gool dhalinta La liga ku baacsanaya Messi iyo Suarez laakiin haddii ay Barcelona hesho Stauni waxay kooxdeeda ku haysan kartaa saddexda xidig ee goolasha ugu badan ka soo dhaliyay La Liga xili ciyaareedkan.